कसरी पुराना उपकरणहरूमा प्रत्यक्ष फोटोहरू हेर्न आईफोन समाचार
कसरी पुराना उपकरणहरूमा प्रत्यक्ष फोटोहरू हेर्न
हिजो हामीले तपाईंलाई यी एनिमेटेड फोटोहरूका विशेषताहरू राख्दै अन्य फोटोहरूसँग लाइभ फोटोहरू कसरी साझेदारी गर्ने भनेर बतायौं, र हामीले भर्खरै उल्लेख गरेका थियौं कि नयाँ आईफोन s एस र s एस प्लस यस प्रकारको एनिमेटेड स्नैपशट क्याप्चर गर्न सक्षम छन्, ती कुनै पनिमा हेर्न सकिन्छ। आईओएस उपकरण। यो तपाईको पछिल्लो संस्करण, आईओएस,, स्थापना भएको छ, यसको उमेरको परवाह नगरी। यो वास्तवमै सरल छ हाम्रो "पुरानो शैली" आईफोन र आईप्याडमा क्याप्चर यी प्रकारका मजा लिन सक्षम हुन र हामी कसरी व्याख्या गर्नेछौं.
नयाँ आईफोनमा यी फोटोहरू हेर्नु यसको थ्रीडी टच स्क्रिनको नयाँ प्रविधिलाई धेरै सजिलो छ। जब तपाईं लाइभ फोटोको रूपमा लिइएको छवि प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईंले स्क्रिनमा केवल हल्का प्रेस गर्नुपर्नेछ जब हामी फोटो हेर्दैछौं र एनिमेसन, अडियोसँगै प्ले हुनेछ। चलचित्रको केहि सेकेन्ड जुन स्नैपशटलाई एउटा तमाशा बनाउँदछ। तर हामी यो उपकरणसँग कसरी गर्छौं जुन थ्रीडी टच छैन? यो धेरै सरल छ, यद्यपि हामीसँग स्क्रीन छैन जुन तपाईं थिच्नु भएको दबाब निर्धारण गर्न सक्षम छ, हामी गर्छौं हामी बराबर इशारा गर्न सक्छौं: थिच्नुहोस् र समाउनुहोस्। छवि जीवनमा आउनेछ र हामी नयाँ आईफोनमा जस्तै उस्तै देख्न सक्दछौं।
महत्त्वपूर्ण विवरण यस प्रकारका छविहरू कसरी पहिचान गर्ने भन्ने छ, किनकि यदि हामीलाई लाइभ फोटो के हो भनेर थाहा छैन भने, हामी इशारा गर्न सक्षम हुनेछैनौं। यी फोटोहरू स्क्रिनको माथिल्लो बायाँ कुनामा सानो आइकनले रडारको रूपमा धेरै केन्द्रित सर्कलहरूको साथ पहिचान गर्दछ। कुनै पनि छवि जुन यस प्रतिमा सँगसँगै एनिमेसनको रूपमा हेर्न सकिन्छ। साथै एउटा अन्तिम विवरण: यदि फोटो तपाईंलाई सन्देश मार्फत पठाइएको थियो भने तपाईंले यसमा क्लिक गर्नुपर्नेछ कि यो पूर्ण स्क्रिनमा देखिने छ र त्यसपछि तपाईं यसलाई लाइभ फोटोको रूपमा हेर्नको लागि होल्डिंगको इशारा गर्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS9» कसरी पुराना उपकरणहरूमा प्रत्यक्ष फोटोहरू हेर्न
कमिलाहरूले के गर्छन् जब आईफोनको घण्टी बज्छ?
एप्पल विन्डोज लोगो मनपर्दैन र आफ्नै बनाउँछ